वर्षाले आकासियो इँटाको मूल्य- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन ८, २०७६ भवानी भट्ट
कञ्‍चनपुर — हिउँदे वर्षाका कारण कञ्चनपुरमा इँटाको अभावसँगै मूल्यसमेत अकासिएको छ । इँटाको अभावले पूर्वाधार निर्माणदेखि अन्य निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । स्थानीयले घर बनाउन सहजै इँटा पाउन सकेका छैनन् ।
‘जग हालेको एक महिना भयो, इँटा नपाएर काम रोकिएको छ,’ भीमदत्त नगरपालिका–५ का अनिल रानाले भने, ‘एक/दुई ठाउँमा अलिअलि पाइएको थियो, त्यो पनि महँगो भएर किन्न सकिएन ।’ रानाका अनुसार दुई महिना अघिसम्म प्रतिइँटाको मूल्य १३ रुपैयाँ थियो । अहिले १८ रुपैयाँ तिर्दा पनि सहजै पाउन सकिने अवस्था छैन । ‘घर निर्माणको खर्च सोचेभन्दा बढी लाग्ने भएको छ,’ रानाले भने, ‘मूल्य घट्ने आश गरेर काम रोकेको छु ।’
सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणकार्य पनि प्रभावित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । कञ्चनपुरमा तीन दर्जनभन्दा बढी इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यस वर्ष कुनै पनि उद्योगले उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । पुराना इँटाको मूल्य पनि बढेको छ । पुराना इँटा खरिद गरेर काम गर्दा धेरै घाटा हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका निर्माण व्यवसायी गणेशदत्त जोशीले भने, ‘फागुन अन्तिमसम्ममा इँटा उत्पादन सुचारु हुने देखिन्छ । त्यसपछि केही सहज हुन्छ कि ।’ उनले इँटा नपाएर दुई/तीन ठाउँमा काम रोकिएको बताए ।
सामान्यतया मंसिरमै उत्पादन सुरु हुने भए पनि यो वर्ष हालसम्म सुरु हुन नसकेको महाकाली इँटा तथा टायल उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलदेवसिंह बुडाल बताउँछन् । उनका अनुसार मौसम खराब नभए फागुन अन्तिमसम्म इँटा उत्पादन भएर सहज रूपमा उपलब्ध हुनेछ । तर मौसम प्रतिकूल बने अझै एक/डेढ महिना लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘वर्षाका कारण हरेक उद्योगले नोक्सान व्योहोर्नु परेको छ,’ बुडालले भने, ‘त्यसैकारण भएको इँटासमेत महँगो हुन गएको हो ।’ इँटा तथा टायल व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकरबहादुर चन्द अहिले कुनै पनि उद्योगमा इँटा स्टक नभएको बताउँछन् ।
यस वर्ष वर्षाका कारण अधिकांश उद्योगले नोक्सानी व्यहोरेको उनले बताए । चन्दका अनुसार काँचो इँटा गलेर एउटै उद्योगमा २०/३० लाखसम्मको नोक्सानी भएको छ । उत्पादन नहुँदा भारतीय कामदारसमेत फिर्ता भइसकेका छन् । प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०९:५७
महोत्सव सधैं खचाखच
‘तर आयोजकको ध्यान मौलिकता जोगाउनेभन्दा कमाउनतिर जाँदा विकृति बढ्दो’
फाल्गुन ८, २०७६ दुर्गालाल केसी
(दाङ) — गत माघ १० देखि घोराही र तुलसीपुरमा एकसाथ महोत्सव सुरु भए । तुलसीपुरमा उद्योग वाणिज्य संघ र घोराहीमा च्याम्बर अफ कमर्सले महोत्सव आयोजना गरेका थिए । २३ किलोमिटर फरकका सहरमा एकैदिन महोत्सव सुरु गर्नु राम्रो नहुने सुझावका बीच पनि दुवै महोत्सव चले । दुवैको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले उद्घाटन गरे ।
दुवैतिर सँगै महोत्सव गर्दा दर्शक कम हुने, कारोबार कम हुने र घाटा लाग्ने चर्चा चलिरहँदा शनिबारको बिदामा बढी दर्शक भएर टिकट नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । दुवै आयोजकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्यो । एकले बोलाएका कलाकारलाई अर्कोले नबोलाउनेसम्मको तिक्तता आयोजकबीच देखियो तर दर्शक भने दुवैतिर उत्तिकै देखिए ।
घोराही र तुलसीपुरमा मेला सकिएलगत्तै लमही र हापुरेमा महोत्सव सुरु भए । दर्शकको घुइँचो कम भएन । माघी पर्वमा थारु कल्याणकारिणी सभाले घोराहीमा महोत्सव लगायो । त्यसमा पनि दर्शकको भीड उस्तै थियो । हरेक साता महोत्सव लाग्दा पनि दर्शकमा कमी आएको छैन । मानिसहरू मेलाप्रति कति आकर्षित छन् भन्ने कुरा यी उदाहरणले देखाउँछन् । ‘गाउँमा बिनापैसा रमाउन पाइन्थ्यो । नाचगान, स्थानीय चालचलन र संस्कृतिमा रमाउन पाइन्थ्यो,’ कला संस्कृतिबारे कलम चलाउने लेखक वसन्त आचार्यले भने, ‘अहिले पैसा तिरेर हेर्ने मेलामा मानिसको भीड छ ।’ पर्यटन, कृषि र संस्कृति प्रवर्द्धन भने पनि मेला–महोत्सवमा त्यस्ता केही काम नभएको उनले बताए । ‘कसरी धेरै रकम उठाउने भन्नेमै ध्यान छ । ५०/६० रुपैयाँ तिरेर प्रवेश टिकट दिइन्छ,’ उनले भने, ‘मेलामा खाली कलाकारको गीत र नाचमा मात्रै जोड हुन्छ । महँगा कलाकारको प्रस्तुति हेर्न महँगो शुल्क तिर्नुपरेको छ ।’
गाउँघरमा पैसा खर्च नगरी हुने मनोरञ्जन हराउँदै जानु दुःखद भएको आचार्यले बताए । ‘पहिले गाउँमा मेलापर्व भइरहने भएकाले मानिसहरू उतै भुल्थे । अहिले गाउँमा हुन छोडेपछि मानिसहरू बाध्य भएर बजारसम्म पुग्छन् र सहरका महोत्सवमा रमाउँछन्,’ उनले भने, ‘यी मेला महोत्सवले विकृति बढी ल्याएका छन् । जुन उद्देश्यअनुसार आयोजना हुन्छ, त्यसअनुसार केही पनि काम भएको देखिँदैन ।’
मेलाहरू उद्देश्यअनुसार नचल्ने समस्या बढ्दै गएको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष विमल रिजालले बताए । ‘पहिलेका मेला संस्कृति बचाउने खालका थिए । गाउँमा धार्मिक, सांस्कृतिक, रीतिरिवाज बचाउने खालको भएकाले बढी महत्त्व थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेका मेला–महोत्सव जे नाममा आयोजना गरिए पनि विकृतितिरै गइरहेका छन् । भनेको उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको देखिएको छ ।’
विभिन्न उद्देश्य राखेर मेला गर्ने तर उद्देश्यको नजिक नपुग्ने समस्या बढी रहेको रिजालले बताए । ‘कम्तीमा ५० प्रतिशत त उद्देश्यअनुसार काम होस्,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने बहस व्यवसायीबीच चलिरहेको छ । जसले पनि मेला लगाउने र विकृति फैलाउने प्रवृत्ति ठिक होइन ।’
दर्शकको भीड हेर्दा मेला–महोत्सव आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको उनले बताए । ‘मानिसहरूलाई केही न केही मनोरञ्जनका माध्यम चाहिएको देखियो । गाउँघरमा मेला लाग्न छोड्दा पनि मानिसहरू मेला महोत्सव खोज्दा रहेछन्,’ उनले भने, ‘हरेक महोत्सवमा दर्शक बढेर टिकट बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको हुन्छ । महोत्सवको अवधि थपिएको हुन्छ । यसले मेलाको महत्त्व कति छ भन्ने देखाइरहेको छ ।’ सहरका मेला महोत्सवले स्थानीय कला र सिर्जनालाई महत्त्व दिन नसकेको कलाकार कमल गाउँलेले बताए ।
‘कुन कलाकारलाई कति रकममा ल्याउने भन्ने कुरामा मात्रै जोड हुन्छ । त्यो पनि मेला ठेक्कामा लिएको मान्छेले बार्गेनिङ गर्छ,’ उनले भने, ‘महोत्सवमा स्थानीय कला, संस्कृति र उत्पादनलाई जोड दिनुको सट्टा आयोजकको आसन ग्रहण र भाषणमा बढी समय जान्छ ।’ सहरका मेला–महोत्सव परम्परागत संस्कृति बचाउने तरिकाले नचलेको उनले बताए । गाउँका मेला हराउनु र सहरका मेला महोत्सवमा विकृति बढ्नु दुवै समस्या रहेको दाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसालले बताए । ‘गाउँघरका परम्परा हराउँदै गए । मानिसहरू भुल्ने, रमाउने र सामाजिक घुलमिल हुने ठाउँ मासिए,’ उनले भने, ‘मानिसलाई कतै न कतै जमघट हुने, रमाउने ठाउँ त चाहिएकै छ । त्यसको पूर्ति सहरका महोत्सवले गरिरहेका छन् ।’
सहरका मेलाले मनोरञ्जनमात्रै नदिएर अनेक विकृति पनि बढाइरहेको उनले बताए । ‘जिल्लाको सीप, कला र कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन भनिए पनि महोत्सवमा सबै बाहिरका सामान राखिएको हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०९:५४
लकडाउनमा गहुँ भित्राउन किसानलाई सकस
गोली हानी महिलाको हत्या, पति प्रहरीको नियन्त्रणमा
सुदूरपश्चिममा क्वारेन्टाइन अवधि २१ दिन पुर्‍याइयो
कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका १४ सशस्त्र प्रहरी क्‍वारेन्टाइनमा
संक्रमित युवकसँगै आएका थिए हजार जना
धनगढीका संक्रमितको परिवारका ७ जनामा देखिएन कोरोना
संयुक्त राज्य अमेरिका ३६८१९६ १०९८६ १९८२८
स्पेन १३५०३२ १३३४१ ४०४३७
इटाली १३२५४७ १६५२३ २२८३७
जर्मनी १०३३७५ १८१० २८७००
फ्रान्स ९८९८४ ८९२६ १७४२९
हाल १,३४७,८०३ ७४,८०७ २७७,४०२
छुवाछूतको भाइरस !
राजेन्द्र महर्जन चैत्र २५, २०७६
कोरोना भाइरसको महाव्याधिसँगै ‘सोसल डिस्टेन्स’ शब्दावली अत्यधिक प्रचलित भएको छ, जुन दक्षिण एसियाली समाजमा तीन हजार वर्षभन्दा अगाडिदेखि अभ्यास हुँदै आएको छ । ‘सोसल डिस्टेन्स’ नै...
सरकार असफल, सेना विवादित
गेजा शर्मा वाग्ले चैत्र २५, २०७६
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी सरकारले नेपाली सेनालाई दिने अप्रत्याशित र अस्वाभाविक निर्णय गरेपछि गम्भीर...
सुदूरपश्‍चिमलाई ध्यान देऊ
सम्पादकीय चैत्र २५, २०७६
मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले यसलाई थप फैलनबाट रोक्न सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षले युद्धस्तरमा कार्य गर्नुको विकल्प छैन । खासगरी,...
खाली दिमाग २ : कोही किन खराब बन्छ ?
श्रीश भण्डारी चैत्र २४, २०७६
लकडाउनको दुई साता सकिनै लागेको छ । फुर्सदमा कुन फिल्म हेर्ने भनेर साथीहरू सिफारिस–सूची पस्किरहेका छन् । मलाई भने उदेक लाग्छ । उनीहरूले सुझाएका त...